QALABKA MURQAHA AMA JILBAHA JILICSAN: SAWIRO, SHARAXYO IYO KALA DUWANAANSHO, SIDA LOO KARIYO - MUSHROOMS
Maqaarka: Sifooyinka, Koboca, Haqab-beelka, Cunnada kariska
Mushinka kantaroolka wuxuu leeyahay magacyo badan - waxaa loo yaqaana sida creak, euphorbia, podskrebysh caan. Laakiin dadka waxaa loogu yeeraa si fudud. Dhammaantiina waxay u egtahay dhawaaqa uu sameynayo marka uu xoqayo kabaha boqoshaada ama ku xoqo mindi. Sida loo helo iyo haddii ay suurtagal tahay in wax lagu karsado - waxaan sii ogaan doonnaa dheeraad ah.
Qaadashada ama maya
Skripuha waxaa iska leh qoyska Syrojezkoyev. Inkasta oo magacan, boqoshaadu wuxuu ku jiraa qaybta afaraad ee korantada waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid la cuno. Waxay ku habboon tahay raashinka haddii si sax ah loo kariyo. Cunista hilibka waa mamnuuc, waxay keeni kartaa sunta. Hawlaha habboon waxay ilaalinayaan astaamaha amino iyo fiitamiinada ay ku jirto caanaha. Tani waa wax soo saarka cuntada - 22 kcal oo keliya 100 g. Waxaa ka mid ah borotiinka iyo karbohidraatka - xeryahanadan waxay xisaabiyaan inta kudhisan dhamaantood.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad wax ka barato boqoshaada la cuni karo oo la dabooli karo qoyska Russula.
Waxay u egtahay sida sharaxaadda dhirta
Skripitsa waa miis yar oo cad, oo badanaa lagu wareersan yahay gruzhem. Si kastaba ha noqotee, noocyada badan ee boqoshaada caanaha ayaa sidoo kale ah kuwo si fudud loo cuni karo.
Cufan iyo fareem, oo u dhexeeysa cabbirka 8 cm illaa 26 cm, inta badanna, boqoshaada dhallinyarada ah waxay leeyihiin dabool ku dheggan oo leh geeso ciriiri ah. Wakhti ka dib, waxay hoos u dhigeysaa; geesaheedu wuxuu noqdaa daldaloolo, oo sidoo kale inta badan la jabiyo. Dhexdhexaadkuna wuxuu ku dhacaa gudaha hoose.
Fringe qashinka waa la waayay. Haddii dusha sare ay ku xirto shey, waxay sameyn doontaa dhawaaq gaar ah.
Ka soocida lugta, naadir. Marka ugu horeysa waa iftiin, laakiin madow sida fungus ku koraa.
Ma taqaanaa? Mushrooms waxay ka muuqatay adduunkeena in ka badan 400 milyan oo sanno ka hor - ka hor intaanay soo bandhigin dinosaurs.
Midab isku mid ah sida kan. Waa mid adag, mid sahlan oo gaaban. Cabbirka - ilaa 5 cm ee dhererka iyo qiyaastii 4 cm dhexroor.
Iftiin, adag iyo si fudud u jaban. Casiirka caanaha ayaa laga soo saaraa - marka ugu horeysa waa caddaan, ka dib markii ay soo noqoto hurdi yar, markaad si buuxda u qallajiso, waxay noqotaa buni. Just juice waa waxyeello - waa kulul iyo qadhaadh.
Waa muhiim! Waxa ugu qaalisan oo ku haboon salting waxaa loo tixgeliyaa in la ururiyo dhammaadka xagaaga Creak - ka dibna weli wuu yar yahay.
Xagee loo eegi karaa iyo goorta la ururiyo
In kayn kasta oo halkaas oo ay jiraan mast ku filan, laamaha jir iyo caleemo. Skripun wuxuu jecel yahay iftiin wuxuuna si fiican u koraa aagga iftiinka ah. Habka ugu fudud ee lagu heli karo wuxuu ku dhow yahay geed iyo bjørk. Waxaad ka qaadan kartaa bilowga xagaaga illaa dayrta.
Funguskaan waxaa lagu gartaa koritaanka kooxo kala duwan oo da 'kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxaa badanaa laga helaa qulqulka kelida ah.
Boqoshaada labeen ah
Waxaa jira saddex nooc oo boqoshaada oo u ekaa jajabyada - dhabta ah, xayawaanka iyo podgruzdok cad.
Waxa ugu fudud ee iyaga ka mid ah si loo ogaado podgruzdok caddaan - marka jajabku uusan ku dhalin dareeraha, iyo suufku ma beddelo midab. Xudduudaha daboolka ah ma aha kuwo aad u cufan, oo ay ka hooseyso taarikooyin khafiif ah oo soo noqnoqonaya. Lugta waa caddaan, laakiin da'da waxay noqotaa midab.
Koox ama midab cad waxaa lagu aqoonsan karaa cidhifyada cufan ee daboolka, taarikada naadir ah iyo kuwa ballaaran. Haddii la jebiyo oo la gooyo, casiir cad oo qadhaadh ah ayaa bilaabi doona inay istaagaan, kaas oo leh midab-huruud ah-jaale ah ee gooyaa.
At loading basbaas daboolan oo siman, oo ka hooseysa taarikada iyo calaamadaha dhaadheer. Marka ay jebiso, dheecaanka caanaha ah ayaa la sii daayaa, taas oo ah cagaaran meesha bartilmaameedka ah.
Iyo, dabcan, dhammaan boqoshaada kuwan, cap ma aha mid u soocaya dabeecad qoto dheer hoos u dhaca.
Sidee loo kariyaa
Mushahaan waxaa loo isticmaalaa oo keliya qaabka salineeska. Nidaamka diyaarinta qalinjabintu waxay qaadataa waqti badan sababtoo ah baahida loo qabo diyaarinta hordhaca ah ee alaabta ceeriin ah.
Ka akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan pickles, pickling, qalajinta iyo barafka.
Diyaargarow hordhac ah
Boqoshaada la uruuriyey waa in la dhaqaa oo lagu qooyaa biyo ugu yaraan 4 maalmood. Xaaladdan, biyaha waa in la beddelo ugu yaraan 3 jeer maalintii.
Video: sida loo diyaariyo qalin jilicsan
Doorasho kale ayaa ah in la buuxiyo biyo karkaraya, baddelida biyaha 4 jeer. Laakiin xitaa nidaamkani wuxuu qaadanayaa ilaa 3 maalmood.
Wax kasta oo aad dooratid - cadaadis saar dhinaca sare - sidaas daraadeed casiirka caanuhu wuu ka soo bixi doonaa dhakhso. Kaliya kadib waxaad si toos ah ugu tagi kartaa salting.
Sali wuxuu noqon karaa mid qabow oo kulul. Midkoodna waxaad u baahan tahay:
crepica - 1 kg;
cusbo - 40-50 g;
dhir udgoon inay dhadhamiso - caleenta, xiirto, basbaaska;
caleemaha currant (waxay gacan ka geysan doontaa ka hortagga muuqaalka caaryar ee bangiyada).
Waa muhiim! Ma ku dari karno toonta si aad u soo qaadato - isaga ka isku dhafan waxay noqon kartaa dhanaan.
Habka jilicsan Diyaargarowga:
In bangiyada pre-sterilized leh hoos u xidhaa si adag u jiifo boqoshaada, ku shub lakabka kasta oo leh milix iyo dhir udgoon.
In boqoshaada dad badan siin dareeraha - waa in ay daboolin alaabta oo dhan inta lagu jiro muddada salting. Haddii aysan ku filnayn, waxaad u baahan tahay inaad ku darto xal saline - 20 g oo cusbo ku shub hal litir oo biyo ah.
Ugu dambeyntii, waxyaabaha ku jira weelka waxaa si adag u daboolay caleemaha oo daboolay dabool.
Ka ilaali baahida ilaalinta qaboojiyaha. Waxaad cuni kartaa 1.5 bilood.
Habka kulul waa wax fiican in aad kareyso oo keliya labeenta laba maalmood. Ka dib:
Karso boqoshaada biyo cusbayn 20-30 daqiiqo ka dib karkaraya, ka saareen xumbo.
Ku daadi saabuun ama xoqan.
Next, ku rid bangiyada si la mid ah sida salting qabow.
Fiidiyoow: jilbaha kuleylka leh
Ma taqaanaa? Mushaharka ugu weyn (maanta), khabiirada deegaaneed ee China ayaa laga helay jasiiradda Hainan 2010. Tagtani waxay miisaankeedu ka badan tahay 500 kg.
Sidaa darteed, waa sahlan tahay in lagu qalqaliyo duufaanka leh culays, laakiin si habboon u shaqaynta noocyada noocan ah waa mid la cuni karo. Waxa ugu muhiimsan waa sida loo qoyo boqoshaada si ay uga takhalusaan qadhaadhka. Iyo ka dib bil iyo badh ka dib, waxaad ku raaxaysan kartaa dhadhan fiican.